Ciidmada Somaliland Iyo Khaatumo Oo ku Dagaalamay Deegaanka Tuke-raq. – Heemaal News Network
Wararka ka imanaya deegaanka Tukaraq ayaa sheegaya in saaka waabarigii uu halkaasi ka dhacay dagaal bariga deegaanka Tuke-raq ee Gobolka Sool ku dhex maray Ciidammada Somaliland ee halkaa fadhiisimada ku leh iyo Ciidamo la sheegay inay ahaayeen kuwa Khaatumo.
Weriyaha HCTV ee Sool oo aanu ka soo xigatay warkan ayaa sheegay in Sarkaal ka mid ah Khaatumo uu u sheegay in Ciidamadoodu Weerar ku qaadeen Ciidammada Somaliland ee fadhiya bariga degmada Tuke-raq, balse illaa hadda lama oga khasaaraha soo kala gaadhay labada dhinac.
Dhanka kale, Dadka ku nool deegaanka uu Dagaalku ka dhacay ayaa la sheegay inay ku tooseen deryanka hubka, arrintaasina ay cabsi ku abuurtay.
Xukuumada Khayr Oo Ciidamada Maraykanka kaLa Hadashay Kordhinta Hawlgalada Somaliya.